Ciyaartii Arsenal iyo Manchester City oo bar-bardhac ku dhamaatay – Mogadishutimes
Ciyaartii Arsenal iyo Manchester City oo bar-bardhac ku dhamaatay
By Feysal Cumar Cabdi Gurey | Mogadishu Times,
Arsenal iyo Manchester City oo dhibcaha ku qeyb saday Emirates stadium. Naadiga Sky Blue ayaa barbaro laba iyo laba ah lasoo galay dhigooda Arsenal.
Ciyaartaan oo aheyd mid aad u xiiso badan ayaa waxaa goolka ku horeeyay kooxda Manchester City oo iyadu marti u aheyd dhigeeda the Gunners Arsenal.
Waxaa daqiiqadii 5aad qeybtii hore ee ciyaarta u saxiixay da’yarka dhawaan galka ah ee reer Germany Leroy Sane oo caawin ka helay xidiga reer Belgium K. de Bruyne.
Arsenal ayaa goolkii looga hormaray iska soo guday daqiiqadii 40aad ee isla qeybtii hore, waxaana u dhaliyay Theo Walcott oo caawin ka helay daafaca reer Germany Shkodran Mustafi.
City oo iyadu weerar is dabajoog ah ku qaadeysay goosha Arsenal ayey laba daqiiqo kaliya ku qaadatay iney mar labaad hogaanka u qabato ciyaarta.
Daqiidadii 42aad, waxaa goolka u dhaliyay gool-dhaliyahooda reer Argentina Kun Aguero oo baas qurxoon ka helay D. Silva. Qeybti hore ee cayaarta waxaa lagu kala nastay laba gool iyo hal oo ay Manchester City ciyaarta ku hogaamineysay.
Qeybtii labaad ee ciyaarta waxaa badal lagu saaray daafaca Arsenal Laurent Koscielny oo dhaawac soo gaaray. Arsenal oo qeybtii 2aad ee ciyaarta dardar xoog leh ku bilawday ayaa daqiiqadii 53aad waxaa u suurta gashay iney goolka bar-baraha la timaado waxaana u dhaliyay Shkodran mustafi oo isagu caawiye ka ahaa goolkii hore. Mustafi waxaa loo magacaabay xidigii garoonka ugu fiicnaa ee ciyaarta.
Real Madrid oo gurigooda ku dubtay Alaves. Naadiga Los Blancos oo minankooda joogtay ayaa sadex iyo eber ku suuldaaray dhigooda Alaves.
Daqiidadii 31aad ee qeybtii hore ayaa Karem Benzema Real Madrid u dhaliyay ka dib caawin uu ka helay D. Carvajal. Goolkaas ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Qeybtii labaad markii la isku soo laabtay Real Madrid oo aheyd naadiga ciyaarta iska maamulaneysay ayaa waxaa u suurta gashay inay la yimaadaan goolkii labaad waxaana u saxiixay Isco oo caawin ka helay C. Ronaldo.
Daqiiqadii 88aad Nacho Fernandez ayaa dhaliyay goolka ciyaarta uu ku dilay. Ciyaarta ayaa waxay ku soo idlaatay sadex gool iyo waxba oo Real Madrid ku maquunisay naadiga Alaves.
Kulamada kale oo la ciyaaray waxaa ka mid ahaa:
Barcelona oo afar iyo hal ugu awood sheegatay Granada.
Milan ayaa taako loo dhigay waxayna barbaro gool iyo gool ah kala kulantay kooxda gabalkeedu sii dhacayo ee Pescara.
Juventus iyo SSC Napoli waxay dhibcaha ku qeybsadeen gegida San Paolo. Juventus oo ku horeysay ayaa waxaa daqiiqadii 7aad u dhaliyay S. Khadira. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay gool iyo waxba oo ay ciyaarta ku hogaamineysay naadiga marwada duqda ah. Qeybtii labaad markii la isku soo laabtay Napoli ayaa la timid goolkii bar-baraha, waxaana u dhaliyey M. Hamsik oo gool-caawin ka helay D.Mertens. Ciyaarta oo ahayd mid aad u xiisa badan ayaa ku soo idlaatay bar baro gool iyo gool.
PGS oo ku guuleysatay koobkii French Coupe De Ligue
Naadiga PSG oo finalkii France League Cup ku xasuuqay kooxda Monaco. PSG ayaa afar iyo hal ku dardartay naadiga ee aadka u xafiiltamaan ee Monaco. Paris Saint German waxay noqotay kooxdii ugu horeysay abid ee afar koob oo isku xigta ku guuleysata French Coupe De Ligue.
Chelsea oo loo awood sheegtay